रेडजोनमा किटको हाहाकार, संसदमा ४४१ को खकार ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रेडजोनमा किटको हाहाकार, संसदमा ४४१ को खकार !
भनिन्छ, कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले सर्वसाधारण वा भीआईपी कसैलाई छुट्याउँदैन । तर, कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नेहरुले नै विभेद गरेपछि कसको के लाग्छ ?
रेडजोनमा रहेका आशंकितहरु कोरोना टेस्ट गर्ने किटको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । यता संसद भवनमा चाहिँ भीआइपीहरुलाई ज्यानको माया कति रहेछ भन्ने राम्रैसँग देख्न पाइयो ।
बिहीबार छुटेकाहरुको शुक्रबार स्वाब संकलन गरिनेछ र भोलि नै रिपोर्ट दिने भनिएको छ । र, त्यही निरोगिताको रिपोर्ट बोकेर सांसदहरु शुक्रबार अपरान्ह संसद अधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।उता, जनताको हालतचाहिँ भीआइपीहरुको भन्दा अलि भिन्न छ ।
समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको मानिएको उदयपुरको भुल्के, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जका जनता त्रासमा बाँचिरहेका छन् । चाहेर पनि आफूलाई कोरोना संक्रमण भए/नभएको थाहा पाउने परीक्षण गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरु कट्याक ट्रेसिङको साँघुरो दायरा बोकेर बसेका छन् र सीमित व्यक्तिको मात्र पीसीआर टेस्ट गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय त उनीहरकै परीक्षणसमेत किटको अभावका कारण धेरै ठाउँमा रोकिएको छ । आरएनए एक्ट्रयाक्सन किट नहुँदा भैरहवास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण रोकिएको छ । कोशी अस्पताल, बिराटनगरमा अटोमेटिक मेसिन बन्द भएको छ । जुम्लास्थित कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको पीसीआर मेसिन चलाउन सकिएन ।
विज्ञहरु नै तीनछक्क !सांसदहरुको सामुहिक थ्रोट स्वाब संकलन देखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरु पनि छक्क परेका छन् । ‘किट अभावले सम्भावित संक्रमितहरुको टेस्ट रोकिएका बेलामा नेताहरुले आफ्नो टेस्ट गराएर अर्को भद्दा मजाक गरे,’ मन्त्रालयका एक विज्ञ भन्छन्, ‘साँच्चै उहाँहरुले कसका लागि राजनीति गरिरहनुभएको छ ?’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्का जनस्वाथ्य विज्ञको प्रश्न छ, ‘नेताहरुले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएर जनताहरु त भुसुना नै हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन् ?
मिस नेपाल उषा खड्गीले तोडिन् वैवाहिक सम्बन्ध